Ubuntu uzama ukuguqula ideskithophu nge-HUD | Kusuka kuLinux
Ubuntu uzama ukuguqula ideskithophu nge-HUD
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, Ukusatshalaliswa, I-GNU / Linux, Izaziso
Ngiyavuma, lapho ngifunda izindaba ze I-HUD (Isibonisi se-Head-Up) Angizange ngiyiqonde inhloso yayo futhi ngacabanga ukuthi omunye umqondo ongenangqondo ongenza abasebenzisi babalekele Ubuntu, njengoba kwenzeka nge Unity. Bengicabanga kanjalo kuze kube Ngibone ividiyo ngencazelo yokuthi lobu buchwepheshe buzosebenza kanjani.
Ngokuyinhloko I-HUD ngizokwenza njalo (phakathi kwezinye izinto), izongena esikhundleni samamenyu wohlelo futhi izosivumela ukuthi siwafinyelele ngokumane uthayiphe inketho esifuna ukuyithola. Singakwazi futhi ukuphatha ezinye izinhlelo ezifana nesiphequluli sewebhu, ukuvula amasayithi, amabhukumaka noma i-imeyili, ngokumane uthayiphe esikufunayo ebhokisini lokusesha le- I-HUD.
Ukuphela kokufanele ukwenze cindezela ukhiye [ITHEBULA] y I-HUD izokhululwa. Ngemuva kwalokho sibhala "lokho esifuna ukukwenza" futhi I-HUD Izokuqedela ngokuzenzakalela, ikhombise izinketho esingazifuna, sikhethe eyiyo, esiyinikezayo [Faka] futhi Voilá !!!
Kepha hhayi lokho kuphela, I-HUD izokwazi ukufunda ukuthi yini okuthandwa ngumsebenzisi, siqopha konke esikwenzayo kulezi zinsuku ezingama-30 ezedlule ukuze sibeke phambili imiphumela efanele thina.
Kungumqondo othakazelisa kakhulu engikushilo ukuthi uzophumelela kakhulu. Okwamanje ngibona kuphela inkinga njengoba sekushiwo ezinkundleni zokuxhumana Kuthiwani uma singazi izinketho zemenyu? Ngicabanga ukuthi kukhona okufanele kuqhamuke nabo, ake sithi mhlawumbe, sebenzisa isinqamuleli sekhibhodi ukukhombisa imenyu yezinhlelo zokusebenza. Kulokho ngifaka lokho ukufeza le njongo, I-HUD udinga ukuqoqa imininingwane eminingi mayelana nohlelo engingabazayo, kwenze lokho Unity yeka ukusindwa.
Kungaba mnandi kakhulu uma abanye Izindawo Bazothatha lo mqondo futhi bakhe uhlelo lokusebenza olubavumela ukuthi benze okufanayo. Yize ngingazi noma E17 noma abaphathi bamawindi abafanayo banenketho. Konke okunye, ngicabanga ukuthi kungumbono omuhle ngokungangabazeki ozoguqula indlela esiyisebenzise kuze kube manje Ideski.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Ubuntu uzama ukuguqula ideskithophu nge-HUD
Amazwana ayi-48, shiya okwakho
Ngokwazi kwami, i-E17 ayinayo leyo nketho.
Lo mqondo uyathakazelisa, kepha uyasebenza?
Kuzoncika kumuntu kunjalo.
Okwamanje ayingibizi, kimi kusho ukulahlekelwa ukusebenza nejubane, ngoba ukuhamba ekushintsheni kwimenyu eyodwa kungaba nzima. Kungumqondo othakazelisayo wamadivayisi wokuthinta, kepha hhayi imvelo yedeskithophu.
Mhlawumbe nginephutha futhi empeleni, esikhathini esizayo, kuyindlela ewusizo nephumelelayo yokusebenza nezinhlelo.
Okufanayo ngishilo. Kepha kuzofanele silinde ukuthi ivuthwe ukubona izinketho esinazo nokuthi zingasebenza kanjani. Okungenani okubonayo kuvidiyo kuyathandeka kakhulu.
I-HUD izoba ngokuzikhethela, imenyu yakudala izohlala itholakala
Uqinisile, kufanele ucacise lokhu ekubhalweni, okuholela ekudidekeni futhi abantu bacabange ukuthi iCanonical isivele ibeka izindlela zayo ... xDDDD.
Ngakho-ke, uma imenyu yomhlaba ne-HUD zihlangana ndawonye (okungenani ngo-12.04, angazi ukuthi kungakanani) konke kuyinzuzo. Ukusebenza kwamanje akulahlekile futhi kulabo abaziyo ukusebenzisa uhlelo oluyinkimbinkimbi kahle (isitayela se-GIMP noma se-Inkscape, esinokukhetha okuningi) kuzobavumela ukuthi basheshise futhi bathuthukise ijubane labo lomsebenzi.
Ngamafuphi, ngendlela engibona ngayo, kubukeka njengomqondo omuhle. Kunginikeza ukuthi ngentuthuko enjengale, ukuthuthuka ku-GNOME 3 ngezinketho eziningi, ubumbano lupholisiwe futhi lushesha kakhulu kanye ne-LTS yeminyaka engu-5, inguqulo elandelayo ye-Ubuntu izoba isimanga sangempela ...
Indoda i-elva endala isiqalile ukuyiklwebha ngesihloko esithi Picajo $ o isitayela, ngakho-ke lokho Ubuntoso kancane
Mhlawumbe yimi enginephutha, kepha ngiyangabaza ukuthi othile kuzicelo ezinjenge-GIMP noma i-Inkscape lokhu kukulethela "amandla nokushesha emsebenzini." Lezi yizinhlelo zokusebenza lapho izandla zisesandleni segundane (noma enye idivayisi esetshenziswa abakhiqizi) futhi nalokhu, kungadingeka futhi ukushintshela izandla kukhibhodi.
Ngokuyisisekelo okuzokwenziwa yi-HUD (phakathi kwezinye izinto), ukufaka esikhundleni amamenyu wohlelo bese usivumela ukuthi siwafinyelele ngokumane uthayiphe inketho esifuna ukuyithola.
Into i-apula elibolile elinayo iminyaka engaphezu kokukhwehlela
Uma uqonde ukugqama noma i-quicksilver, azifani. Uma kungolunye uhlelo engingaba nentshisekelo yokulazi.
Impendulo ku ...
Bengikhuluma ngokugqama, kepha angizukuthola okuningi kulokhu engivele ngibheke esikhathini esizayo esiseduze
Hhayi akufani. Nami angizukungena ezingxoxweni.
Ngeshwa ukugqama kungcono nge-XD
Nakekela ubu-canonical, mhlawumbe sekuvele kunelungelo lobunikazi nge-apula nokuvalelisa i-HUD ngayo yonke into nekusasa elithembisayo.
Ngaphandle kwebhokisi, ngithanda yonke into ekhulisa isikhala sesikrini, futhi uma ivulwa ngesinqamuleli esingcono
Uma ngingasho ukuthi akusizi ngalutho ngoba nami ngiyisebenzise kakhulu kwi-Mac, kepha angikulethi njengombono omusha womlando
Kuyinto emisha kudeskithophu yeLinux, mhlawumbe kunokufana okude kakhulu neKRunner; noma ngabe i-MAC inayo noma cha ayinangqondo; Futhi ngaso sonke isikhathi lapho othile ethula okuthile emakethe, ikakhulukazi uma kuvela kuCanonical, ufunda wena: "IMac isivele inayo."
IMAC indala noma indala kuneWindows, futhi kunezinye izindlela ezi-2 kuphela, kahle, noma ikopishelwa kokunye.
Kepha ngokomqondo wakho, sonke kufanele siyeke ukukhula, ukucabanga, isikhathi sokutshala imali, imali nokusebenzisa i-MAC (noma windows xp), ngoba konke okukhona i-MAC inayo futhi kugcina kuyikhophi.
Futhi ngaso sonke isikhathi lapho othile ethula okuthile emakethe, ikakhulukazi uma kuvela kuCanonical, ufunda wena: "IMac isivele inayo."
1: Ngithanda izinto zokuqala
2: I-Canoni $ oft iveza konke njengokuyinto entsha yekhulu leminyaka, futhi iningi lazo yizinto amanye ama-distros anazo noma iMac ebinazo isikhathi eside.
Ngokuphambene nalokho, umqondo wami ukuthi uma iMac isivele inokuthile okungcono ukuthi abayikopishi futhi benze okuthile ngokuvela okujwayelekile kwe-distro
Ngicabanga ukuthi uyakhohlwa ukuthi akuyona yonke into eqamba okusha ...
Awucabangi ukuthi ngaphambi kokwenza ngcono into engu-X, kufanele uqale wenze into efanayo noma efanayo?
Mhlawumbe i-HUD yebo, icishe ifane nalokho okukhona kwi-Mac ukuthi kungabizwa ngokuthi yikhophi, kepha mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi kuzoba nokuthuthuka, izinto ezintsha okungekho naku-Mac kuzoba 🙂
Kulungile, kopisha okungcono okwenziwe abanye bese ukwethula njengokwakho
Cha, konke ukweqisa kubi haha.
Okuthile ekuqaleni kwayo kungenzeka kungabi okwangempela kakhulu emhlabeni, kepha lapho-ke kunganikeza ngemisebenzi / izinketho ezintsha i- "original" engenazo 🙂
Futhi kuseyinto eyenziwe ngomunye umuntu, ukuthi uCanoni $ oft unezele ama-shits amane kuyo futhi uyiveza njengeyabo.
Futhi ukuthi iphuzu eliphakathi okuhle yinkohliso
Fuck ubukeka njengama-Ubuntos wangempela azungeze lapha nobabili nesihlabathi
Nganginephutha, ngangifuna ukuphendulwa ngezansi ngoba kuya ku-elva
Ngicabanga ukuthi udida isiqalisi sohlelo lokusebenza, amafayela, izindawo, amabhukumaka njll. Akufani.
Ungagcini ngokuthi ngeke ngiphikisane ...
Ngibonise amanye amavidiyo ayi-1000 agqamile ku-YouTube lapho ngenza ngokufana nalolu hlelo lokusebenza bese ngiyavala.
Ngokuyisisekelo okuzokwenziwa yi-HUD (phakathi kwezinye izinto), ukufaka esikhundleni amamenyu wohlelo futhi izosivumela ukuthi siyifinyelele ngokumane uthayiphe inketho esifuna ukuyithola.
Lokho kugqame kanjalo nokuBuka.
Okuyiqiniso ukuthi ngokusho kwendatshana i-HUD inezinto eziningi, kuzofanele sibone ukuzinza (ngiyakucabanga) futhi ngokwenza enye into kusengumbono we-Apple
Nginokungabaza okuncane nokungabalulekile. Usuyibonile ividiyo?
Yebo, sengivele ngiyazi ukuthi i-HUD yenzani. Kepha bengizama ukuthola i-athikili noma ividiyo ye-YouTube isikhashana engitshela ukuthi ngingakwenza kanjani nge-Spotlight futhi angikutholi. Angikunyatheli ngampela. Ngabe ngokwazi kwami ​​ukuqonda indawo ethile kufana ne-krunner noma i-gnome-do.
Uxolo-ke, bengicabanga ukuthi bekunyathela.
Ngicabanga ukuthi i-KRunner ayibukeki njenge-Spotlight ngoba ku-KRunner kungenxa yemiyalo
Ngisebenzise iMac O $ X unyaka (owaziyo) futhi sineMacbook Pro ekhaya (okungeyona eyami)
Ngabe kufanele ngibuke amavidiyo ngempela?
Yebo, bukela le vidiyo, hhayi ukuze ikucikize kodwa ngokuhamba kwesikhathi wena, NGENJONGO usho lokho okucabangayo.
Sengivele ngikutshele engikucabangayo, enye inkomo ye-Ubuntu evezwa njengeyintsha entsha yekhulu, futhi ngalesi sikhathi iqiniso ukuthi anginaso isifiso samavidiyo ngoba ngilele ngaphezu kwamahloni
Cha, ukhombise kuphela ukuthi ungumlandeli wokugxeka Ubuntu. Ndoda, bukela ividiyo bese ugxeka ngokufanele .. 😀
@elav <° Linux, awungeke ucele "ozonda ubuntu" ngenhloso.
Indoda akuyona leyo futhi, kepha kuyiqiniso noma ngabe ngiyizonda i-distro ensundu
Kubonakala kimi ukuthi Isibindi siqinisile.
Namuhla ngithole lokhu:
Angazi ukuthi uzowabona kanjani la mazwana, kepha bengibeke izixhumanisi ezimbili zevidiyo okusobala ukuthi enye ilahlekile. Enye lena bekuyile (ngiyethemba izophuma):
Zas wonke umlomo kaSandy no-Elva
Kuthiwani uma singazi izinketho zemenyu?
Awudingi ukwazi izinketho; Udinga ukwazi ukuthi ufuna ukwenzani, kusukela lapho kuya phambili, uma i-HUD isebenza njengokuhlosiwe, izokhipha izinketho ezitholakalayo. Ake sithi unenjini yokusesha ehlakaniphile.
Ngakolunye uhlangothi, uma ngingenalo ulwazi mayelana nezinketho zemenyu, ngingachitha amahora - njengoba nginawo - ngisho nemenyu yakudala.
Ekugcineni maqondana nokuthi kuzozikhethela yini noma cha. Uma unethemba lokuthi izovela ngethemba ku-Ubuntu 12.04; unikezwe ukungavuthwa kwe-HUD nokuthi i-Precise izoba yi-LTS kungenzeka ukuthi itholakale ngokuzithandela ukuze ihlolwe. Ku-Ubuntu 12.04 ngeke ithathe isikhundla semenyu; kepha kulindeleke ukuthi ngaphakathi kwemijikelezo elandelayo yentuthuko izokwenza. Yonke into izoncika ekwakhiweni, ekuhlanganisweni kwemisebenzi efana nokwaziwa kwezwi nokwamukela umkhiqizo.
Ngokwethembeka, kuyinto entsha futhi ngiyithatha njengempumelelo yeCanonical bazamile ukuyifanisa nezinye izinhlelo ezinjengeKrunner neSynapse, kepha kuyacaca ukuthi ziyizinto ezihlukile.
Uma kukhona umuntu onobufakazi obuphikisayo, ngingathanda ukuzwa ngakho.
Ububi, obudinga Ubunye bokuwusebenzisa bungenza ngibe livila ngakho angicabangi ukuthi ngiyalisebenzisa ngizolinda enye indlela yokuthi iXFCE ibe khona.
Imenyu yendabuko: vula uhlelo = 2 ukuchofoza kwenkinobho yegundane lesobunxele.
Lokhu kusungulwa okusha:…?
Igama eliyisihluthulelo ukuthayipha, okungabalingisi abaningi ukududuza noma ukushesha. Ngubani owathi ukubhala yonke into kuyenzeka?
Kwabachwepheshe lokhu kungaba kusengaphambili, kepha kubathandi bezinkanyezi, inkinga eyodwa nje kuphela emhlabeni osuvele udidekile wobuntu.
Halala kunoma ngubani okujabulelayo.
Futhi isikulufa ngekhibhodi ... .. ngubani othe kukhululeke kakhudlwana ukuthi kumele uthayiphe yonke into?…. Ubuntu empeleni abuniki…. Kuvela ukuthi kufanele sithayiphe bese siyilinda ukuze isinikeze imiphumela esiyifunayo ... Lokhu kulungile kuhlelo lokusebenza oluthile "lokusesha noma ukuphathwa kwefayela noma ukulawula". Kepha ukuthi zonke izinhlelo kanye nohlelo uqobo luziphatha kanjena…. kuzokwenzeka njengasebunyeni.
Khumbula ukuthi ekugcineni konke lokhu kunomgomo owodwa: Amathebulethi, amaselula, ama-TV ...
Imininingwane eyodwa: uthi kufanele "uthayiphe bese ulinda ukuthi isinikeze imiphumela oyifunayo." Lokho akulona iqiniso kangako, noma kunalokho, kufanele kufaneleke.
I-HUD ayigcini ngokusesha imenyu yamagama afana nosesho lwakho, futhi ifunda kubo. Ngakho-ke, kusibonelo se-Inkscape esivela kuvidiyo esemthethweni, uma ubheka isihlungi futhi usisebenzise, ​​isistimu "iyafunda" kuyo futhi ngokuzayo ngeke uthayiphe okuningi ukucinga isihlungi esifanayo, ngoba iyazi ukuthi ukuthi uyayidinga futhi.
Futhi, uma uhlelo lokusebenza lungenakho ukujula noma izinketho eziningi, ngeke kudingeke uthayiphe okuningi ukuthola umsebenzi ofuna ukuwenza, akunjalo? 🙂
Ngikhululekile ukwazi ukuthi i-HUD iyakhethwa, bengivele ngikufundile lokhu ku-UL futhi akekho noyedwa ocacise noma yini: S
Yebo, yebo, yebo… .. bazama ngayo yonke imizwa (nangakwesokudla) ebusweni bezixhaso ezintsha.
Okufana kakhulu nesiqalisi se-Enso ebesineminyaka eminingi sikhona kuWin futhi kuyamangaza ukuthi inembile kangakanani nokuthi uzuza isikhathi esingakanani lapho uthola i-hang yayo, njengoba, njengoba ngisho, ingabizi kakhulu.
Akusona nje isiqalisi, ngakho-ke angicabangi ukuthi sithatha indawo yamamenyu wohlelo lokusebenza kepha kunalokho umphelelisi, kumayelana nokukwazi ukwenza zonke izinhlobo zezenzo zansuku zonke ngokushesha nangokunembile.
Ngijabule ukuthi bakhipha lolu hlobo lohlelo lokusebenza lwe-ubuntu, ngizozama.
Ukube bengifuna Ubuntu isebenze ngokubhala imiyalo, besingeke sidinge indawo yokuqhafaza ... Ubuntu buzoba yi-TERMINAL esebenzisa i-EXCESSIVE RESOURCES. Umphumela = UBUNTU yi-WINDOWS VISTA entsha
I-Linux yandisa ukutholakala kwayo kuma-desktops kusuka ku-1% kuya ku-1.41%
I-European Commission yasayina i-ACTA